I-Alpine Brown Tortoise / Izibuko Ezinsundu - I-ULLER
20% ISAPHULELO ESENGEZIWE - IKHODI: FUCK2020
Qhubeka nokuthenga →
0.00 € Inani eliphansi
Alpine brown Tortoise / Brown
60.00 € 175.00 € Ugcina ama-65% (115.00 €)
ISIQINISEKISO SOKUGCINA ISITOLO SAMAHHALA we-X-POLAR Lens TECHNOLOGY
Ku-Uller® sinobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu kuma-opics emhlabeni. Ngamalensi ethu we-High Tech Performance Optics X-POLAR sifinyelela incazelo kanye nokucaca ngaphezu kwokwejwayelekile okusivumela umehluko wombala kanye nombala.
IPolulose Acetate Uhlaka olunezinhlaka
Usayizi we-Unisex wabesilisa nabesifazane
Ama-lens we-CR39 anesigaba sokuvikela i-UV400 3
UMQOQO WESIKHUMBUZO NGAPHEZU KONKE
Zonke izibuko zethu zakhiwa ngabaklami abangochwepheshe abazidala zivela ezidingweni ezivezwa yiqembu lethu labasubathi abangochwepheshe bese zenziwa ngezinto ezinhle kakhulu kumafektri amahle kakhulu we-optical kanye nohlaka. Uwo nalowo nalowo wababili bethu bezingilazi udlulele kuzinqubo ezingamatshumi ayisithupha ngaphambi kokusebenzisa ifomu lokugcina, ngaphezu kokuphasisa ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile nokuhlolwa kokusebenza.
I-BOX NE-Case SET
Ibhokisi ngalinye liza nezinto ezilandelayo:
Icala elinamandla okufinyeleleka lokuhamba okungcono
Isembozo esiguquguqukayo semikrofoni
IZIMLANGO ZENZIWE EPREMIUM CELUSOSE ACETATE
Uzimele owenziwe nge-celletose acetates amahle kakhulu. Sikhetha ngokucophelela i-batch ngayinye ye-acetate ukuqinisekisa ukuthi umphumela uzoba umhlabeleli. Uhlaka ngalunye lwenziwa futhi lwenziwa ngesandla ngendlela yobungcweti ngokuphelele yizingcweti zobungcweti, ngaleyo ndlela kuqinisekiswa umkhiqizo onamaPrimiyamu aqeda ngaphezulu kwamazinga wemakethe. Ngenxa yalokhu, siguqula izibuko ze-Uller® zibe umkhiqizo ohla oluphezulu kakhulu ongatholakala embonini yezamehlo.
IZINGXENYE ZESIMALI SOLID
Amafreyimu ethu afaka izingxenye ezingamelana nensimbi zamandla nekhwalithi ephezulu kakhulu. Amabhandeshi asezingeni eliphezulu aqinile futhi aqinile kodwa ngasikhathi sinye anokuzwakala okushelelayo kokujoyina. Indlela yayo elula yokuvula nokuvala yakhelwe ukwenza lula ukunethezeka kwakho kodwa ngasikhathi sinye ngekhwalithi enganqobeki ezokunikeza izinzuzo ezinhle kakhulu zokusebenza.
I-HIGH TECH Performance Performance OPTICS I-X-POLAR LENSES TECHNOLOGY
Ubukhali bayo obukhulu busivumela ukuthi sikhulise umehluko nokuthembeka kwemibala, ngaleyo ndlela sithuthukise umbono wemvelo nokusiza.
Sakha amalensi ku-CR39 ukufezekisa ukumelana okukhulu nobulukhuni ngokumelene nemithelela, kanye nokuvikelwa okukhulu emisebeni ye-ultraviolet. Konke lokhu ngaphandle kokudebeselela ukukhanya okukunikeza induduzo enkulu.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngathi Ama-lens we-X-Polar, chofoza lapha
* Uller® uhlobo olusemthethweni oluxhasa: iGrupo Aramon (iFigigal, iPanticosa, uCerler, iJavalambre neValdelinares), iAltitude HeliSki Aragón, uWhistler Wander, uBoo Taüll no-El Dorado Freeride
Isinikezeli seqhwa Ochwepheshe
Ukunikezwa kochwepheshe beqhwa
Nikeza abafundisi be-ski
Ukunikezwa kweklabhu yaseSki
© 2021 Uller. Wonke Amalungelo Agodliwe